Amacici emishado egolide elimhlophe
Imfashini Wedding Fashion
Ukukhetha izindandatho zomshado kubaluleke kakhulu, isikhathi esithintekayo sokulungiselela umkhosi womshado. Imibhangqwana eminingi, njengangaphambili, ikhetha igolide legolide eliphuzi, kepha ngokuvamile abashadile bayanda futhi bathola izindandatho zomshado ezivela ngegolide elimhlophe.
Ungayithola kanjani igolide elimhlophe?
Ukuze bathole umthunzi omuhle okhanyayo, abakhiqizi bangezela ezinsimbi zegolide ezifana nesiliva ne-palladium. Ekuqaleni esetshenziselwa i-alloy ne-nickel, kodwa kusukela kulo i-jewelers yenqaba kancane kancane yokuthi ingabangela ukusabela kokugula . Umkhiqizo oseduzane ophelile uhlanganiswe ne-rhodium, ngenxa yokuthi indandatho iba yikhanyane futhi icwebe. Izindandatho zomshado ngegolide elimhlophe ziyabiza kakhulu kunezindandatho eziphuzi ngoba i-palladium idlula izindleko ze-zinc nethusi ezifakwe ekubunjweni kwazo.
Lezo zihlobiso zomshado zangempela zithandwa ngabantu abavame ukugqoka ubucwebe besiliva - indandatho eyenziwe ngegolide elimhlophe ayifaki ukushayisana emfanekisweni. Ngaphezu kwalokho, izindandatho zemishado ezimhlophe zegolide ezimhlophe zihlangana nezindlela zamuva zetfashini, okubalulekile kubantu abasha abangena emshadweni.
Indlela yokukhetha ihadi elimhlophe legolide elimhlophe?
Amathiphu ambalwa azokusiza ukuba ukhethe kahle futhi ujabulele isipho somshado esihle kakhulu:
Khetha ngezinkokhelo. Isibalo samanani entengo sincike ngobukhulu be-carats nobukhulu kanye nohlobo lwetshe, uma lizobe likhona emhlobiso. Ungadangali uma isabelomali sincane - kulokhu ungacabangela inguqulo elula, kodwa enhle ngaphandle kwetshe elingu-9 noma le-14.
Kubalulekile ukucabangela ukuthi ukusika kunjani. Okuvamile kakhulu "uhlaka" - lufanelekile ukugqoka nsuku zonke. Izinhlobo eziningana zokusika zisetshenziselwa izinhlobo zezindleko ezibizayo.
Amadayimane emasongweni okubandakanya ayenziwe ngegolide elimhlophe elibukeka lingenakuqhathaniswa. Kodwa, mhlawumbe, uthanda i-emerald, i-ruby noma isafire. Ngaphezu kwalokho, indandatho ingaba nelitshe elilodwa phakathi noma i-placer kulo lonke umkhiqizo. Ukucabanga ngalezi zindaba kunengqondo kusengaphambili.
Ukuhamba ngokuthenga okubalulekile nokungabizi, khetha isitolo ngegama elihle futhi uqiniseke ukuthi uthole kumdayisi ukwakheka kwegolide elimhlophe oyithengayo. Uma i-nickel ikhona kuyo, wenqaba ukuthenga - le nsimbi, lapho uxhumana namakhemikhali esiwasebenzisa njalo ukuhlanza indlu, ngokuvamile kuholela ekucaseni isikhumba. Kodwa khumbula ukuthi umkhiqizo wekhwalithi eliphezulu uzoba yi-18 carat. Unganqikazi ukubuza futhi isitifiketi esiqinisekisa ubuhle betshe.
Beautiful white gold wedding izindandatho - onobuhle
Izindandatho ziwuphawu lokuphakade, uthando, ukwethembeka, ngakho-ke udinga ukuzikhethela ngokucophelela, ngakho-ke azizange zifake imfashini kuphela, kodwa nazo zithande abashadile. Ezitolo zokugqoka, noma yikuphi umbhangqwana, ngokuqinisekile, uzothola ubucwebe obuhle kakhulu. Isibonelo, uma kukhona ingxabano phakathi komakoti nomkhwenyana mayelana nombala wezindandatho, khona-ke ingasombulula kalula, ikhetha amabhande omshado wegolide elimhlophe neliphuzi. La ma-alloys ahlangene ngokuphelele, afaneleke ngokufanele kunoma yikuphi ukugqoka nesitayela .
Ama-Naturals, alwela ukuxilongwa, efisa ukukhombisa ukunambitheka kwawo okuhle kakhulu, ungancoma ukufaka izindandatho zegolide elimhlophe le-matte. Ngokuqinisekile bayodonsela iso futhi bajabule ngemfihlakalo yalo futhi beyingqayizivele.
Ukudayiswa kokubili kukhona izindandatho ezinkulu futhi ezincane. Uma wena noma okhethiweyo wakho isikhathi eside, iminwe emincane, khona-ke ukukhetha okuhle kuyobe kuhlanjululwe, kuhloswe noma kuhlolwe amafilimu. Iminwe emibili ifanelana namanye amasongo amakhulu.
Izingubo zokudweba ehhovisi lokubhalisa
Ingubo yomshado ye-Beige
Bolero ngomgqobo womshado
Wedding igqoka ne-corset - i-lace engcono kakhulu nemodeli enhle
Wedding Dresses 2013-2014
Izimbali ze-Wedding kusuka ebuhlalu
Bonbonniere ngezandla zabo siqu
Uhlu lomshado lwezinhlamvu
Ukugqoka komshado - ungagqoki umhlophe
Izixazululo zangaphakathi - imibono yobuciko yokuklanywa kwezindlu
Isobho sebhontshisi ku-multivariate
Shoes - fashion spring-ehlobo 2016
I-Academy noma eyunivesithi - ephakeme?
Indlela yokuqala nyangazonke ekhaya?
Imvubelo yokupaka nge-cherries
Amazambane othosiwe anamakhowe - iresiphi
UNicole Kidman - ngaphambi nangemva kwamaplastiki
Inkinga yencazelo yokuphila
Yeka ukwethuka: ama-blogger angu-20, okuyisikhathi sokuma ngokushesha!
Umkhuleko we-Xenia wasePetersburg mayelana nokuthanda, umshado kanye nenhlalakahle yomndeni
Yini ewusizo ngenzuzo ye-feijoa?
Ingaphakathi ekamelweni elincane
Amafutha e-Turpentin okukhwehlela izingane
Indlebe yehla i-Anauran